प्रकाशित: बुधबार, चैत ४, २०७७, १८:३०:०० बीपी अनमोल
काठमाडौं– नेकपा (एमाले) माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला काठमाडौंमा जारी छ। भेलामा देशभरबाट ४ हजार नेता कार्यकर्ता सहभागी भएका छन्।
भेलामा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पेस गरेको ९ पृष्ठ लामो अवधारणापत्र भोलि सुझावसहित पारित गर्ने कार्यक्रम छ। अवधारणापत्र माथिको छलफलका लागि विभिन्न प्रदेशगत समूह बनाइएको छ।
प्रदेश नम्बर १ मा भीमप्रसाद आचार्य तथा प्रदेश नम्बर २ बाट घनश्याम भुसाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकी प्रदेशमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनी प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशमा योगेश भट्टराई, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल, सम्पर्क कमिटीमा बेदुराम भुसाल, जनसंगठन तथा पेशागत संगठनमा बेदुराम भुसाल र केन्द्रीय निकाय तथा विभागमा अमृतकुमार बोहरालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
भेलाकै बीचमा नेपाल समयका बीपी अनमोलले एमाले उपाध्यक्ष तथा नेपाल–खनाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसँग कुराकानी गरेका छन्।
नेकपा एमाले कानुनी रुपले नभएर, व्यवहारतः फुटको संघारमा पुगेको हो ?
हो। कानुनले त छुट्याइसकेको छैन। कानुनको आधारमा गएको पनि छैन। हामी हतारले फुटमा जनेवाला पनि छैनौँ। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको व्यवहार र गतिविधि हेर्दा हामी त असहज वातावरणमा आयौँ।
पहिले उहाँको व्यवहारपछि हामी एक सेकेन्ड पनि नेकपामा बसिरहेनौँ नि। छोडेर आयौँ, पुरानो ठाउँमा। तर एमालेलमा आइसकेपछि उहाँले जुन व्यवहार देखाउनुपर्ने हो त्यो देखाउनुभएन। बरु २८ गते आफ्नो गुटको भेला बोलाएर, अध्यक्ष र महासचिव मात्र राखेर हामीलाई पदाधिकारीबाटै निकालि दिनुभयो।
यसरी गुटको गतिविधि गर्ने, अवैध तरिकाले गुटगत निर्णय गर्ने, गुटको भेला गर्ने। यस्तो गरेपछि मिल्ने आधार कमजोर हुन्छ नि। कसरी सकिन्छ मिल्न ?
ओलीको कार्यशैलीले नेकपा विभाजन भयो। एमाले पनि त्यही शैलीले विभाजन हुन लागेको भन्ने तपाईंको ठहर हो ?
ठ्याक्कै हो। सुरुमा दुई पार्टी (एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलाउने काम उहाँकै पहलमा भयो। एकीकरण भयो। एकीकरण भएपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो।
सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि एकीकरणको मतलब नै गर्नुभएन। त्यसमाथि बैठकमै नआउने, बैठकै नबोलाउने। प्रचण्ड, माधव कमरेडलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने गर्नुभयो। त्यस्तो हिसाबले गएपछि हामी पार्टीमा बस्न नसक्ने अवस्था बन्यो।
बालुवाटारमै बैठक बस्दा पनि बैठकमै नआउने गर्नुभयो। अरुको कुरा सुन्नै नचाहने। उहाँले नै लखेटेको कारण बाध्य भएर यो अवस्था (छुट्टै कार्यकर्ता भेलाको अवस्था) आएको हो।
म चाहन्छु पार्टीमा विचारविमर्श हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। अन्तरद्वन्द्व हुन सक्छ तर पार्टी फुट्नु हुँदैन। व्यवहार नमिल्न सक्छ, शैली फरक हुन्छ। बैठकमा आलोचना, आत्मालोचना गर्ने गर्नुपर्छ। यो हो नि डेमोक्रेसी बचाउने तरिका।
यसले एकअर्कालाई सच्याउने, आफु सुध्रने गर्नुपर्छ। तर उहाँको नेतृत्वमा त्यस्तो भएन। यसले गर्दा हामीलाई पीडा छ। पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउँ, बामपन्थीलाई गोलबन्द गरौँ भन्ने हाम्रो योजना हो।
सुरुमा हामीले हामीले उहाँलाई विश्वास गरेका थियौँ। त्यत्रो प्रधानमन्त्री बनाएको होइन ? सत्तामा पुर्याएको होइन ? उहाँले हामीलाई कहाँ पुर्याउनु भयो खै ? कहाँ पुग्यौँ एकैचोटी ?
कार्यकर्ता भेला रोक्न प्रधानमन्त्रीले चेनावनी दिनुभयो, पार्टीको विधान छ। त्यो अनुसार अघि बढ्छु भनेर तपाईंहरुलाई चेतावनी आयो नि ?
चेतावनी त जसले नि दिन्छ। उहाँले त्यसो गर्न मिल्दैन, गर्न पनि सक्नुहुन्न। र, कारबाही गरेर देखाउने भए गर्नुहोस्। त्यसपछिको वातावरण कस्तो हुन्छ, कम्तिमा पनि अहिलेको जस्तो सहजताबाट त धेरै पर जान्छ। अप्ठ्यारोमा जान्छ।
यति धेरै इमानदार, अनुशासित र उत्साहित कार्यकर्ता छन्। पार्टी भनेर पार्टी बचाउन लागिरहेका छन्। उनीहरुलाई धोका भयो। यो पार्टीपंक्तिलाई उहाँले विश्वासमा जित्न सक्नुपर्ने हो नि, होइन ?
अनि उल्टो मेरोविरुद्ध लागेको भन्ने ? यस्तो भयो भने उहाँ अन्तिममा एक्लो परेर सिद्धिने हुन्छ। अरु केही हुन्न।
पुस पाँचमा प्रधानमन्त्रीले जुन निर्णय गर्नुभयो। त्यतिबेला पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा थियो। अदालतको निर्णयपछि पार्टी नै फरक भएपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले तपाईंहरुलाई अर्कैतिर मिल्न भएको भनेर आलोचना गरिरहनु भएको छ त ?
यो नौटंकी हैन ? माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेको कसले ? फेरि एकता भएको पार्टीलाई छिन्नभिन्न पारेको चाहिँ कसले ? यति गरेपछि त्यो भन्न त लाज लाग्नुपर्ने हो।
त्यही प्रचण्ड कमरेडको काँधमा टेकेर प्रधानमन्त्री हुने, पछि उसैलाई धोका दिने ?
उहाँले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनु पर्दैन ? उल्टो हामीलाई आरोप लगाउने ? त्यसो भएकाले उहाँमा वैचारिक विचलन आइसक्यो। कम्युनिस्टको विचार पनि छैन। प्रतिगमनको सिद्धान्त छ। उहाँले त लोकतन्त्र सिद्धयाउन खोज्नुभयो नि।
यि सबै कुराबाट उहाँको नैतिक धरातल कति कमजोर छ भन्ने त देखिसकियो। प्रतिगमन गर्ने अनि त्यसलाई पनि अदालतले सच्याइदिनुपर्ने। फेरि लाज नमानिकन कुर्सीमा बसिराख्ने !?
यस्तो खालको चरित्र बोकेको गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी स्विकार्न सकिन्छ ? त्यसैले उहाँ सच्चिनुपर्छ। मान्छेमा कमीकमजोरी हुन्छ, कमजोरी स्विकार्न जानेन भने सिद्धिनेबाहेक केहि हुँदैन।
आज कर्णाली प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने एमाले संसदीय समितिले निर्णय गरेछ। कर्णालीको आजको निर्णायलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कम्युनिस्टले मेलमिलाप गरेर एकताबद्ध भएर जाने हो भने पोलिटिकल डेभलपमेन्ट पनि राम्रो हुन्छ। त्यसरी जाने भए त्यसको पनि वातावरण छ। सजिलो पनि हुन्छ। तर यदि मिलेन भने कर्णालीमा जे भयो केन्द्रमा पनि त्यही हुन्छ।
एमाले विभाजनको निकास के हुनसक्छ ? कसरी एकताबद्ध हुनसक्छ ?
हामी फु्ट चाहँदैनौ। एकता नै चाहन्छौं। अस्ति पनि उहाँले बोलाउनुभएको ठाउँमा गएकै हो। नेताहरु जानु्भयो। केही निर्णय सचिन्छ कि भनेर सोध्यौँ। तर उहाँले त यो भेला गर्न पाउँदैनौ भनेर भन्नुभयो।
आफूले गुटको भेला गर्न हुने, हामीले चाहिँ कार्यकर्ता भेला गर्न नहुने ? त्यसो भएकाले उहाँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्न। उहाँ एमाले बलियो बनाउने पक्षमा पनि हुनुहुन्न।
त्यसैले उहाँ कम्युनिष्ट विचारबाट विचलित बनिसक्नुभयो। कमजोर बनिसक्नुभयो। उहाँलाई कम्युनिष्ट नै मन नपर्ने भइसक्यो। उहाँ त दक्षिणपन्थी भइसक्नुभयो। प्रतिगामी बनिसक्नुभयो। कतै उहाँले यो सम्पूर्ण कुरा सिध्याएर देशलाई नै बर्बाद बनाउने हो कि भन्ने सम्भावना बढेको छ। त्यसैले बेलैमा सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ।